Tsy niraharaha ny fangatahan’ny governemanta malayziana hanivana sioka momba ny famaliana tondra-drano ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Nalaza media sosialy ny ‘aza manome ho an'ny governemanta’
Voadika ny 05 Janoary 2022 4:13 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Español, Italiano, English
Jery avy eny an'habakabaka ny faritra tondra-drano malayziana ao Klang nandritra ny volana desambra 2021. Pikantsary voalohany tao amin'ny YouTube avy amin'i AiMediaMY araka ny (CC BY 3.0)
Niangavy tamin'ny Twitter hanivana ireo ranty mitsikera ny fomba fitantanana ny tondradrano lazainy fa manitsakitsaka ny lalànan'ny firenena ny governemanta malayziana. Nanaiky ny fangatahana ny Twitter fa nolaviny ny hamafa avy hatrany ny ranty, manonona ny fanoloran-tenany hanandratra ny fahalalaham-pitenenana.
Tamin'ny 17 Desambra, nahatonga tondra-drano ratsy indrindra tao Malayzia tanatin'ny taona vitsivitsy izao ny oram-baratra (misesisesy). Nitondra fahafatesan'olona miisa 41 sy famindrana olona mihoatra ny 61 000 ny tondra-drano.
Voampanga ho ela fiasa amin'ny fitarihana vonjy voina ny governemanta. Nanehoan‘ny mpisera aterineto hevitra ny tsy fiomanan'ny sampandraharaha misahana izany na dia teo aza ny fanolorantsaina mialoha amin'ny mety hisian'ny tondradrano. Tao amin'ny Twitter, nalaza sy nironana tao Malayzia ny farangonteny #DoNotDonateToGovernment sy ny fehezanteny ‘aza manome vola ny governemanta’ rehefa nanomboka nanao fanangonam-bola hanaovana bemihisatra vonjy voina ny manampahefana maro. Manontany ny mbola ilàna hanaovana fitia tsy mba hetra ny mpisera Twitter nefa efa mandoa ny hetrany.
Namaly ny tsikera ny Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC na Vaomiera Malayziana momba ny Fifandraisana sy ny Fampitam-baovao Marolafy) milaza ny sioka ‘vetaveta’ mifandraika amin'ny voinan-tondradrano ho manitsakitsaka ny toko 233 amin'ny Lalànan'ny Fifandraisana sy ny Fampitam-baovao marolafy (CMA) 1998 noho ny fanimbàn'izy ireo ny ‘tombontsoam-pirenena’.
Tsy ela ireo mpisera Twitter maro dia naharay filazana avy amin'ny ekipa misahana raharaham-pitsarana ao amin'ny Twitter fa voapetaky ny governemanta malayziana marika hofafàna ny rantin'izy ireo. Nampahafantatra azy ireo ny Twitter fa tsy hofafàna aloha ny rantin'izy ireo fa notoroany hevitra ry zareo handray fepetra mety hiarovana azy ireo sy hilaminan-dry zareo ara-pitsarana.
Naharay imailaka tahaka an'io avy amin'ny Twitter (misahana raharaham-)pitsarana io ihany koa aho. Maneho miharihary izany fa tsy voafehin'ny governemanta izy ity. Fotoana izao ho antsika, rakyat, hitabataba sy hitolona. hiady ho amin'ny zon-tsika.
Manonona ny ‘rakyat’ izay midika hoe vahoaka amin'ny fiteny Bahasa io sioka io.
Nanaovan'ny MCMC fitoriana tamin'ny Twitter ireo sioka mitsikera ny fanentanana hanolotra fitia tsy mba hetra sy (mitsikera) ny fanehoan-kevitry ny manampahefana amin'ny famariparitana ireo lasibatra azo omena ny fanampiana mahaolona.
Nisy ireo mpisera sasany namafa ny sioka mba tsy hisian'ny olana ho tonga eny amin'ny fitsarana.
Mety misy hanontany tena ny sasany aminareo amin'ny nalehan'ny siokako miresaka fanilikilihana ireo vahiny eny amin'ny fialofana. Te-hanavao filazana fotsiny aho hoe nahazo fampitandremana avy amin'ny Twitter sy ny MCMC aho hanaisotra ny siokako satria manitsakitsaka ny lalàna malayziana
Notsikerain'ny Centre for Independent Journalism (CIJ na Foiben'ny Fanaovan-gazety mahaleotena) ny MCMC manaiky “ampiasaina ho ampinga fiarovana ny tsy fahombiazan'ny governemanta.” Manana hafatra ho an'ny manampahefana ihany koa izy:
Mifantoha amin'ny fampiasana ny fananana sy fitaovam-bahoaka mba hanome ara-potoana ny fanavaozam-baovao sy ny torohay azo jerena momba ny tondra-drano sy ny fandehan'ny asa vonjy voina tanterahana, fa tsy hanenjika ireo mitsikera na manivaka feo amin'ny lazaina ho tsy fahaizan'ny Fanjakana mitantana ny tondradrano.
Nampian'ny CIJ fa fotoana izao hanovana tanteraka ny CMA izay anararaotan'ny manampahefana hampanginana ireo feo manivaka tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra.
Noderain'i Charles Santiago, parlemantera (MP) iray ny nataon'ny Twitter nitsipaka ny fitakian'ny governemanta Malayziana:
Reveko ny Twitter nitsipaka tsy hanivana feo manivaka ara-drariny manohitra ny govt tsy mahita ny vahoakany. Ampolony no maty tamin'ny tondradrano azo nosorohina sy ny fanavotan'ny govt nitarazoka. Saingy liana kokoa amin'ny fandokoana ho tsara endrika ny MCMC ? Tsy mahalala menatra io ô!
Lim Kit Siang, parlemantera iray hafa, nandrisika ny praiminisitra hanasazy ny manampahefanan'ny MCMC noho ny fiezahana hanivana sioka :
Tokony hobedesin'ny praiminisitra, Ismail Sabri, ny MCMC ary hanambara fa tsy hanakana ny Malayziana tsy hampihatra ny zony ara-dalampanorenana halalaka amin'ny fitenenana hitsikera ny governemanta sy ireo minisitra ao aminy.
Ny marina, efa tokony hanome baiko hanaovana famotorana feno ny hetsika ataon'ny MCMC mangataka amin'ny Twitter hanaisotra ireo rantsy mitsikera ny famalin'ny governemanta amin'ny voina nateraky ny tondradrano, ny praiminisitra, ary tokony hanaisotra ireo manampahefanan'ny MCMC tompon'andraikitra amin'izany aza.